Waa kuwee wadamada ugu hilib cunka badan dunida? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Waa kuwee wadamada ugu hilib cunka badan dunida?
Waa kuwee wadamada ugu hilib cunka badan dunida?
Waxaa 50-kii sano ee ugu dambeeyay kor u kacay isticmaalidda hilibka.
Soo saaridda hilibka ayaa haatan waxa uu ka sareeyaa in ka badan shan goor sanadka marku ahaa 1969-kii-waxaa uuna xilligaasi ahaa 70 milyan oo tan halka haatan uu marayo in ka bafdan 330 milyan oo tan.
Sababta ugu weyn ee uu kor ugu kacayna ayaa waxaa batay dadka cuna hilibka.
xiligaasi dadka ku nool dunida waxaa ay ahaayeen ilaa iyo Saddex bilyan oo qof halka haataanna ay marayaan in ka badan 7.6 bilyan oo qof.
Sannadkii 2013-kii, iyo sannadihii dambaba waxaa kaalinta ugu horreeysa ee waddamada ugu hilib isticmaalka badan galay Mareeykanka, Australia, New Zealand iyo Argentina kuwaasi oo bulshada ku nool qofkiiba isticmaala 100kg oo u dhiganta 50 digaag ah amaba neef lo’ah barkii.
Inta badan dalalka dhaca galbeedka Yurub, ayaa qofkiiba waxaa uu isticmaalaa 80 ilaa 90 kilograms.
Waxaa kaloo la ogaaday in waddamada ugu faqrisan dunida ay isticmaalaan hilib aad u yar.
Qiyaas ahaan shakhsiga Itoobiyaanka ah ayaa waxaa uu sannadkii isticmaalaa 7-kg, halka dalalka Ruwanda iyo Nigeria uu qofkiiba sannadkii isticmaala 8-kg iyo 9-kg. Taasi oo isku celcelis ahaan ka yar 10 goor dalalka Yurub.
Dalka Kenya tan iyo 1960-kii waxaa sidaa u weyn iskama beddalin isticmaalka hilibka.
Waddamo badan oo ka tirsan Yurub iyo waqooyiga Ameerika, ayaa sheegay in ay yareeynaan amaba joojinayaan isticmaalka hilibka balse hadalkaasi miyuu shaqeeyay?
Dhab ahaantii maya, sida ay daraasadda sheegtay.
Daraasad ay goordhow daabacday wasaaradda beeraha ee Mareykanka ayaa sheegeeysa in isticmaalka hilibka ee marka la eego calaa qof ay sare u kacday sannadihii ugu dambeeyay.
Xaaladaha qaar, cunista hilibka faa’iido ayay leedahay.
Isticmaalka hilibka iyo caanaha ayaa waxaa ay sare u qaadaan caafimaadka dadka,gaar ahaan waddamada uu dhakhligoodu hooseeyo oo aan awoodin in ay helaan cunnoyin u dhigma hilibka iyo caanaha.
Balse dalal badan ayaa waxa uu isticmaalka hilibka dhaafay heerkii loogu tala galay.
Xaqiiqatan isticmaalka hilibka guduudan ayaa waxa uu keenaa cudurro la xiriira wadnaha iyo qeybo ka mid ah cudurka kansarka.
Previous articleDeg Deg, Burco [Biyo Guure News]Xildhibaan fashiliyay Qalab iyo Gaadiid aay lahayd dawlada hoose oo La Iibiyay, baaqna udiray Madaxawyne Biixi
Next articleJamaal Cali Xuseen, Tuugadu waa Labo Nooc, yaabay Sideetan Milyan ayaa La ……………